आर्थिक संकट व्यहोर्दै पारस, कस्ले दिन्छ पारसलाई पैसा ? - Dainik Nepal
आर्थिक संकट व्यहोर्दै पारस, कस्ले दिन्छ पारसलाई पैसा ?
दैनिक नेपाल २०७१ साउन ११ गते ८:१६
काठमाडौं, ११ असार । थाइल्यान्ड बस्दै आएका पूर्वयुवराज पारसको सम्पूर्ण खर्च उहाँको परिवारले नदिए पनि अन्य आफन्तहरूले दिने गरेको पाइएको छ।
उहाँको खर्च तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र पुत्री दिलाशा, सिताष्मा, पूजा तथा ज्वाइँ राजीव शाहीले दिने गरेको खुलेको छ। थाइल्यान्डमा बास बस्दा शुरूका दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिँदै आउनुभएको थियो। लागूऔषध सेवन गरेको आरोपमा थाइल्यान्ड अदालतले पक्राउ गरेर सो मुद्दाबाट छुटकारा पाएपछि उहाँलाई ज्ञानेन्द्र परिवारले आर्थिक सहयोग गर्न छोडेको थियो। ‘पछिल्ला दिन उहाँलाई दिलाशा, सिताष्मा र राजीव शाहीले तथा थाइल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका दुई व्यापारीले सहयोग गर्ने गरेका छन्’ –थाइल्याडमा रहेका एक नेपालीले भने। ‘आफन्तले रकम नपठाए थाइल्यान्डका व्यापारीसँग लिने र नेपालबाट रकम आउनासाथ तिर्ने गर्नुभएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
तीन वर्ष अघि एघार दिनसम्म बिरामी हुदा पुर्वराजाले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सुधारगृहको खर्च परिवारले तिरेका थिए। तर अहिले उहाको बसाईको सम्पुर्ण खर्च ब्यापारी र धिरेन्द्रका छोरीहरूले पठाउने गर्नुभएको छ। लागु औषधको मुद्धाको फैसला भएको दिन यही असार २६ गते थाइल्याण्डको सुकुमित स्थित होटल डेभिसमा झगडा पर्दा ६५ हजार भाट पारसले जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। सो जरिवानामा समेत थाइल्याण्डका ब्यापारिले सहयोग गरेका थिए। पछि तिर्ने बाचा गरेपछि उहालाई ब्यापारिले सहयोग गरेका थिए–एक नेपालीले भने। पारस अहिले आर्थिक संकटमा पर्न थालेको त्यहास्थित नेपाली सहयोगीले जानकारी दिए। उहाले भन्नुभयो–बाबु ज्ञानेन्द्रले सहयोग नगरेपछि उहा आर्थिक संकटमा पर्न थाल्नुभएको छ। तोडफोड गरेको विषयमा अब अगष्ट ४ अर्थात साउन १९ गते हुने फैसला पछि उहाँको थाइल्याण्ड बसाइ हुने वा नहुने समेत टुङगो लाग्नेछ ती नेपालीने भने।
पारस परिवारले पे्रमिका कन्नीकालाई नलिइकन एक्लै आए नेपाल फर्कन दिने नभए नदिने तयारी गरिरहेको छ। तर पारस भने प्रमिका नलिइकन नेपाल आउने अवस्था नरहेको बताइएको छ। अहिले चाङमाइ सुधारगृहमा रहनुभएका उहा कोही संग सम्पर्कमा हुनुहुन्न। मोबाइल अफगरेर बसिरहेका उहा अगष्ट ४को फैसलाको लागि फुकेट आउने जनाइएको छ। अब नेपाल फर्कने वा नफर्कने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै टुङगो लागेको छैन। अनेक विकल्प खोजिरहेका पारसले अब कुनै कम्पनी दर्ता गरेर सो कम्पनीको प्रोपाइटरको रूपमा विजनेश भिसा लिएर बस्नसक्ने सम्भावना रहेको छ–स्रोतले भन्यो। प्रेमिकाकै कारण उहा नेपाल फर्कने सम्भावना निक्कै कम रहेको छ–स्रोतले भन्यो।
पारसको भीषाको म्याद अगष्ट ६ तारिख अर्थात साउन २१ गते सम्मको लागि मात्रै छ। करिब तीन महिनादेखि आफन्त पारसलाई भेट्न परिवारका सदस्य थाइल्याण्ड गएका छैनन। पुर्व युवराज्ञी हिमानी करिब ४ पटक थाइल्याण्ड पुगिसक्नुभएको छ। करिब अढाई वर्ष अघि ११ दिन अचेत अवस्थामा रहेका पारसको थाइल्याण्डको समितिभेज अस्पतालमा तीन साता लामो उपचारपछि सुधार केन्द्रमा लगिएको थियो। चाइमाइ रहेतापनि पटक पटक थाइल्याण्ड आउने गर्नुभएका पारस प्रमिका कन्नीकासंगै बस्दै आउनुभएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा इश्वरराज ढकालले समाचार लेखेका छन् ।